N'ihi na ndị na amaghị ama, Black Forest bụ a sara oké ọhịa na mpaghara South-West Germany. More kpọmkwem, ọ dị na steeti Baden-Württemberg na enyene a ịrịba òkè nke ya.
The Black Forest, ma ọ bụ Schwarzwald dị ka ọ na-akpọ na German, nwere ọtụtụ ebe na mara mma panoramic echiche. Ọ na-na-jupụtara pụtara osimiri ndagwurugwu na anwụ na-acha, ọmarịcha ọnụ ọnụ nke ọtụtụ ugwu nta na i nwere ike ịhụ ebe a.
Ihe bụ ihe ọzọ, ị ga-ahụ n'ógbè ahụ dum ọmarịcha na fairytale-dị ka ihe niile afọ ogologo! Nke ahụ bụ a eziokwu n'ihi na ọ na anya nnukwu mgbe ọ bụ anwụ na-acha, ezo, na mgbe e nwere ihe snow. Ị pụrụ ịhụ na o doro anya na na ọtụtụ foto nke ebe.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/black-forest-by-train/- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#blackforest #blackforestgermany ụgbọ oloko ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Train Travel ụgbọ okporo ígwè njem